किन म सामाजिक सञ्जाल मा बच्चाहरु को यी चित्रहरू छैन पोस्ट गर्न सक्छन्?
हामी छोराछोरीलाई रूपमा आमाबाबुले चुम्बन रूपमा प्राकृतिक मानिन्छ फोटो लिन र तिनीहरूलाई सामाजिक सञ्जाल साझा जसमा एक संसारमा बाँचिरहेका छौं। तर आफ्नो बच्चाहरु को पनि शेयर फोटो तिनीहरूले एक जन्मदिन मना गर्दा, नयाँ लुगा मा प्रयास गर्नुहोस् वा चिडियाखाना जाने, एकदम राम्रो, आफ्नो जीवन केही क्षण निजी रहनुपर्छ। अन्यथा, तपाईं, खतरा, कारण असजिलोपन वा, बुरा तिनीहरूलाई पार्नसक्छ चोर लागि सम्भाव्य लक्ष्य बनाउन। हामी इन्टरनेट टाढा छोराछोरीलाई यी फोटो राख्न सिफारिश किन हो।
सार्वजनिक अवलोकनका लागि छैन - जहाँ यो आंशिक वा पूर्ण नग्न, उदाहरणका लागि, समय मा उहाँले bathes गर्दा हो आफ्नो बच्चा, कुनै पनि फोटो। दुर्भाग्यवश, यी तपाईं आफ्नो मनपर्ने फोटो, उदाहरणका लागि, गलत हातमा पर्न सक्छ बाल पोर्नोग्राफी सम्बन्धित छन् ती हुन्।
जब बच्चाहरु बिरामी वा घाइते छन्
आमाबाबुले रूपमा, तपाईं आफ्ना छोराछोरीको सुरक्षा छ, तर तिनीहरूलाई प्रयोग नगर्नुहोस्। तपाईं आफैलाई नराम्रो लाग्छ जब कसैले तपाईँको फोटो प्रकाशित गर्न चाहनुहुन्छ: आफैलाई यो प्रश्न सोध्न? शायद छैन। तपाईंले प्रकाशित र के छैन के निर्णय गर्दा विचार यो लिनुहोस्।
जहाँ बच्चाहरु लजालु छन् फोटो,
सायद तपाईं लाज गर्न बच्चा अनलाइन रूपमा उसलाई धेरै क्रोधित चाहन्छु। तर यो अभ्यास दुवै छोटो र लामो अवधि मा विनाशकारी नतिजा हुन सक्छ। फोटो को प्रकाशन आमाबाबु र छोराछोरी बीच भरोसा उल्लङ्घन गर्ने मात्र, यो पोस्ट-दर्दनाक तनाव विकार, पछि जीवनमा निराशा र चिन्ता गर्न सक्छ।
यस पट मा
तपाईं भविष्यमा सम्भावित परिणाम सोच्न भने यो प्रकारको चित्र, गोप्य राखिएको हुनुपर्छ। सम्झना, जो तपाईं एक सामाजिक सञ्जाल मा राख्नु, यो सधैंभरि त्यहाँ रहनेछ। के तपाईं साँच्चै एक किशोरी जहाँ उहाँले पहिलो पटक लागि potty मा बस्छन, आफ्नो फोटो हेर्न चाहनुहुन्छ भनेर लाग्छ?
आफ्ना छोराछोरीको सुरक्षा, कहिल्यै पूरा नाम, ठेगाना आफ्नो प्रकाशित, र जहाँ तिनीहरू तिनीहरूले एक्लै वा एक Babysitter हिंड्न स्कूल, जानुहोस्। तपाईंले यो जानकारी प्रयोग गर्न सकिन्छ जसले र कसरी थाहा छैन।
तपाईं सामाजिक सञ्जाल छोराछोरीलाई फोटो प्रकाशित गर्ने निर्णय भने, यो तपाईंको अधिकार हो। तर तपाईं अन्य आमाबाबुको लागि भनेर निर्णय गर्न सक्दैन। तिनीहरूले आफ्ना छोराछोरीलाई को अनुहार गर्न विरोध हुन सक्छ इन्टरनेट मार्फत हिंडे। तपाईं समूह फोटो जहाँ तपाईंको बच्चा बाहेक अन्य छोराछोरी छन् प्रकाशित गर्न अनुमति निश्चित गर्नुहोस्।
इन्टरनेटमा केही फोटोहरू राख्न कसरी आफ्नो बच्चाको स्कूल जीवन असर गर्न सक्छ बारेमा सोच्नुहोस्। उदाहरणका लागि, आफ्नो कमजोरी, डर वा भनेर वर्णन गर्न प्रयोग केवल मूर्ख उपनाम देखाउँछ कि एक फोटो, आफ्नो बच्चा humiliate र आफ्नो सामाजिक जीवन को लागि परिणाम हुन सक्छ।
तपाईं तस्बिर लिन, दोस्रो बच्चा एक बियर हातमा दिइएको थियो हुन सक्छ। वा उनको काखमा मा बच्चा राख्न, जबकि ग्यारेज बाहिर चेक, र यो Selfie संग गर्न रोक्नुहोस्। जस्तो देखिने innocuous कुराको तस्वीर राम्रो रमाइलो हुन सक्छ, तर तपाईं अनलाइन तिनीहरूलाई साझेदारी गर्दा सबै परिवर्तन। यी तस्बिरहरू सबै विवरण पहिलो नजर मा देख्न सकिन्छ रूपमा, आलोचना र सम्भावित समस्या खतरा तपाईं खुला गर्छ।
Natasha लौरेल: जीवनी, फोटो, समीक्षा
कसरी "सम्पर्कमा", पृष्ठ मेटाउन?
OSA। के छ र यसको मूल्य के हो?
लैंगिक Herpes उपचार तत्काल हुनुपर्छ!
Kozelsk: होटल र गेस्ट हाउस
अंगुर दाख कसरी खान: केही nuances
कसरी घर मा distilled पानी बनाउने? distilled पानी तयारी
आफ्नो स्वास्थ्य कस्तो सुधार गर्न: भिटामिन प्रतिरक्षा बढाउने